Brand24: Adeegsiga Dhageysiga Bulshada si loo ilaaliyo loona kobciyo meheraddaada | Martech Zone
Brand24: Adeegsiga Dhegeysiga Bulshada si loo ilaaliyo loona kobciyo meheraddaada
Jimco, Diisambar 23, 2016 Douglas Karr
Waxaan dhawaan lahadalnay macmiil ku saabsan isticmaalka baraha bulshada aadna waan ula yaabay sida xun ee ay ahaayeen. Waxay si daacadnimo ah u dareemeen sidii oo ay ahayd waqti lumis, in iyagu aysan si fudud ku gaari karin natiijooyinka ganacsiga macaamiishooda ku wareegan Facebook iyo bogagga kale. Waa wax laga xumaado in tani ay wali tahay aaminaad baahsan oo ay qabaan ganacsatadu toban sano ka dib markay baranayeen sida loo geeyo istaraatiijiyadaha iyo qalabka caawinta. Kaliya 24% noocyada ayaa sheegaya inay sameeyaan dhageysiga bulshada
Waa maxay Dhageysiga Bulshada?
Dhegeysiga bulshada waa habka looga faa'iideysanayo aaladaha kormeerka waqtiga-dhabta ah si loo dhagaysto tixraacyada sumaddaada, sheygaaga, dadkaaga ama warshadahaaga internetka, iyo sidoo kale cabbiraadda tixraacyada waqtiga. Qalab gaar ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah makiinadaha raadinta kama soo sheegaan macluumaadkan waqtiga-dhabta ah - inta badan waxaa ka maqan inta badan wada hadalka ku saabsan baraha bulshada gebi ahaanba.
Halkii aan ku faafin lahayn soo bandhigida tirakoobyada foosha xun, waxaan kaliya tusnay iyaga sida ay u shaqeysay. Waanu tijaabinay Brand24 muddo bil ka yar oo hadda ah waxaanan jeclahay fududeynta sida loo dejiyo loona kormeero sumadeenayada, dadka, waxsoosaarka iyo warshadaha iyada oo loo marayo barxadda - ka dibna la ogeysiiyo markii ay jiraan fursado. Brand24 waxay leedahay interface aad u nadiif ah, waa mid la awoodi karo, waxayna leedahay digniino emayl oo dhameystiran.
Adeegsiga Dhageysiga Bulshada si loo ilaaliyo loona kobciyo meheraddaada
Waxaan tusnay macaamiisheenna sida looga faa'iideysto warbaahinta bulshada wanaagga ganacsiga, iyada oo loo marayo tan xaalado ah:
Service - Waxaan socodsiinnay su'aalaha qaar oo waxaan aqoonsannay halka ay astaantooda internetka looga sheegay, laakiin cidina kamay jawaabin shirkadooda. Waxay ahayd fursad luntay inay ka soo gudubto xaalad xun oo ay ka caawiso mid ka mid ah macaamiishooda out laakiin way tabiyeen. Shirkaddu ma aysan ogeyn in wada-hadallada ay ka dhacayaan meel aan si toos ah loogu calaamadin wadahadallada.
Sales - Waxaan ku wadnay su'aalo ku saabsan adeegyadooda waxaanan tusnay halka ay macaamiisha qaarkood ee khadka tooska ahi kaga jiraan internetka iyagoo weydiinaya adeegyada ay tahay inay bixiyaan… laakiin jawaabaha ayaa dhammaantood ahaa shabakadda rajada ee isku dayaysa inay talo bixiso. Qiyaas haddii mid ka mid ah kooxdooda iibku ay soo dhex gashay oo ay siisay xoogaa-celin xirfadeed Macaamiil cusub? 54% ka mid ah suuqleyda B2B ayaa sheegay in ay ka soo saareen raadadka warbaahinta bulshada
Gudbinta - shirkaddu waxay kaqeybgaleysey munaasabadaha warshadaha qaarkood halkaas oo ay kor ugu qaadayeen adeegyadooda. Waxaan tusnay halka ay dadka kale ee ka tirsan warshadooda ay ka sameysmayaan shirar jadwal ah oo lala yeelanayo macaamiisha mustaqbalka ka hor dhacdada iyadoo loo marayo warbaahinta bulshada. 93% go'aannada iibsadayaasha wax iibsada waxaa saameyn ku leh baraha bulshada
Suuq- - shirkaddu waxay samaynaysay suuq-geyn dhaqameed laakiin weligood kuma aysan riixin dadkooda inay helaan macluumaad dheeri ah. Bogooda, waxay ku lahaayeen buugag ebook iyo ilo kale, laakiin weligood kuma dhiirrigelin qadka tooska ah. Waxaan tusnay sida ay tartamayaashoodu ugu guuleysteen dhiirrigelinta waxyaabaha ku jira iyo wadista wadista bogagga degitaanka.
haynta - Waxaan tusnay shirkadda in shirkadaha kale ay macaamiishooda ka caawinayaan khadka tooska ah ee dadweynaha, iyagoo siinaya taageero weyn iyada oo loo marayo kanaal walba… sida macmiilku u doonayo. Kaliya maaha hab weyn oo lagu haysto macaamiishaada, laakiin u oggolaanshaha macaamiisha kale ee mustaqbalka inay arkaan adeegga weyn. Kaliya 39% ganacsiyada ayaa soo sheega iyagoo adeegsanaya xogta macaamiisha iyo qaababka habdhaqanka si ay u qaabeeyaan istiraatiijiyad suuqgeyn ah
Aragtiyo - waxaan weydiinay sida ay uga helayaan ra'yi ku saabsan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda waxayna yiraahdeen waxay sameeyeen sahamin xilliyeed iyo wicitaano macaamiil ah. Waxaan tusnay sida ay ugu wadi karaan sahanno kaladuwan baraha bulshada si ay uga helaan jawaab celin joogta ah macaamiisha firfircoon iyagoon qarash gareeynin. 76% suuqleyda ayaa sheegaya inay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo xog badan diirada saara si ay u guuleystaan
saamaynta - shirkaddu waxay laheyd iibiyayaal iyo la-hawlgalayaasha warshadaha oo aad caan u ahaa, laakiin ma aysan gaarin waxyaabaha soo socda waxayna saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah dadkaas iyo shirkaduhu waxay ku lahaayeen internetka. Waxaan tusnay sida ay ku heli karaan ugana qori karaan caawinta saamileyaasha inay gaaraan dhagaystayaal cusub oo khuseeya iyagoon hanti badan ku bixin xayeysiinta.
Aqoonsiga - waxaan tusnay sida ay ula socon karaan ugana jawaabi karaan dhaleeceynta xun ee lagu soo rogo internetka aragtida dadweynaha. Kaliya maahan inay ka jawaabaan, waxay bixin karaan jawaab u oggolaaneysa macaamiisha kale ee mustaqbalka inay fahmaan sida ugu wanaagsan ee ay u daryeelaan xaaladahaas.
Reviews - waxaan siinay dhowr goobo dib u eegis oo ku saabsan warshadooda, qaar aysan xitaa ogeyn inay jiraan. Waxaan ka helnay iyaga oo samaynaya cilmi-baaris ku saabsan halka laga sheegayo kuwa la tartamaya. 90% macaamiisha waxay ku kalsoon yihiin talooyinka asxaabtooda in ka badan 14% kuwaas oo ku kalsoon xayeysiinta
Content - markii aan tusnay isdhexgalka tartamayaashooda, waxaan awoodnay inaan aqoonsanno wada hadallo faahfaahsan oo helay fiiro badan - fursad ku habboon oo lagu qoro ebook ama lagu sii daayo macluumaad muuqaal ah.
Raadinta Dabiiciga ah - waxaan tusnay sida wadaagista macluumaadka ay u horseeday tixraacyo, taas oo horseedday in bogag kale lala wadaago, soo saarista xiriiryo aad u khuseeya oo aad u awood badan oo wada qiimeynta raadinta dabiiciga ah.
qorista - waxaan tusnay sida ay u bilaabi karaan beegsiga iyo soo jiidashada hibada shirkadooda iyaga oo adeegsanaya baraha bulshada.
Isbeddellada - waxaan tusnay sida mowduucyada warshadooda ay marba marka ka dambeysa u sii kordhayaan ama u sii yaraanayeen, taas oo u suurta gelineysa inay si wanaagsan u gaaraan suuqyada iyo go'aannada suuqgeynta ee ku saabsan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda.
Networking - waxaan soo bandhignay sida aysan badanaa u ahayn inta qof ee raacaya sumad, bog, ama qof baraha bulshada - waxay ahayd sida ay ugu suurta geliyeen isku xirnaanta shabakadaha cusub ee rajada.
Bilaw Maxkamad Bilaash ah oo Brand24 ah
Haddii shirkaddaadu shidan tahay debcin, Brand24 waxay leedahay is dhexgal weyn. Xitaa ka sii wanaagsan, waxay heystaan ​​runtii aad u fiican app mobile iyo sidoo.
Xogta dhageysiga bulshada ka B2C
Tags: brand24fikradaha macaamiishahaynta macaamiishaAdeegga macaamiishaisbeddellada macaamiisharaadso saameynisbeddellada warshadahadib u eegis sheygasumcadmaaraynta sumcadReviewsSuuq Goobiddhageysiga bulshadadhiirrigelinta warbaahinta bulshadakormeerka bulshadaiibinta bulshadaiibinta bulshadatrack dib u eegista wax soo saarka
Sida loo Iibiyo Magacyadaaga Domain
Maqaal weyn! Waad ku mahadsantahay sheegida iyo ku talinta Brand24 ♥